Dhaq dhaqaaqyo iyo Isku abaabul dagaal oo laga dareemayo Jubada hoose – SBC
Dhaq dhaqaaqyo iyo Isku abaabul dagaal oo laga dareemayo Jubada hoose
Posted by editor on July 31, 2011 Comments
Saacadihii ugu dambeeyay waxaa xiisado colaadeed iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan laga dareemayay deegaanada ka midka ah jubada hoose ee ay gacanta ku hayaan ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya, sida deegaanka Dhoobley iyo deegaano hoostaga.
Sidoo kale Deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada Xarakada Alshabaab ayaa iyana laga dareemayaa xiisadahan dagaal.
Saacadihii ugu dambeeyay ayaa dad goob joogayaal ah waxay noosheegeen in dhinacyada halkaasi ku sugan ay wadeen abaabulo ku aadan weeraro ay isku qaadaan iyada oo dadka xoolo dhaqatada ee ku sugan deegaanada la isku hayo ay bilaabeen in ay barakac sameeyaan.
Magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale maanta iyo shalayba siweyn loogaga dareemayay dhaq dhaqaaqa ciidan ee ay wadaan xarakada Alshabab ee halkaasi gacanta ku heysa.
Gaadiidka Dagaal ee xarakada ayaa lagu arki karay iyagoo xowli ku maraya wadooyinka magaaladaas iyagoona ku sii jeeda jiidaha dagaalka.
Sikastaba ha ahaatee deegaanada gobolka Jubada hoose shacabka ku dhaqan ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay ahayeen kuwo u diyaar garoobaya bisha Barakeysan ee Ramadaan, halka dhinacyada iska soo horjeedana yihiin kuwo u diyaar garoobaya dagaal ku soo aada Xiliga Bisha Ramadaan.